Load Break switch (LBS) Vagadziri & Vatengesi - China Load Break switch (LBS) Fekitori
FZW32-40.5 (RD) Series Yekunze Yakakwira Voltage Vhuchaji Mutoro Break Break
FZW32-40.5 yekunze AC yakakwira voltage kukatanura vharuvhu mutoro kuputsa switch ndicho chigadzirwa chitsva chinotora epamba iripo hurombo mutoro kuputsa switch yekugadzira ruzivo uye mhiri kwemakungwa tekinoroji yekugadzira uye murume ufact ire. mutoro wekutsemura switch unoumbwa neakagura reza, yekuzadza chipingamupinyi uye mashandiro mashandiro. vharuvhu yekudzimisa arc, pane zvakafanira sekudzima kwakasimba kugona kweasc, kushanda kwakavimbika, hupenyu hwakareba, vhoriyamu diki, hapana njodzi inoputika uye hapana kusvibiswa kunokanganisa ...
PGS Series Yekunze Yakakwira Voltage SF6 Mutoro Break Break
PGS-630A pole yakatakurwa mutoro break switch inoshandiswa kuputsa rated voltage 12/24 / 40.5kV, yakatarwa ikozvino 630A, 50 / 60Hz simba rekuparadzira sisitimu, kuvhara mutoro izvozvi uye pamusoro pemutoro wazvino wesimba system, inogona kupatsanura otomatiki kuronda zvikamu zve simba rekugovera iro zvinokanganisa zvinoitika. Iyo switch inofananidzwa neyemagetsi controller inova neazvino tekinoroji. Iyo switch ine manual, mota, kure oparesheni modes. Iyo yemagetsi controller inogona kuiswa mukati meiyo stainles ...
FZW32-12 Nhepfenyuro Kunze Kwakakwira Voltage Inobvisa Vharuvhu Load Break switch
1. Rondedzero FZW32-12 mhando yekunze yepamusoro voltage kudonhedza vacuum break mutoro switch ndeimwe nyowani mhando yekutakura switch inova iko kusangana kwevakuru ruzivo rweyemba iripo mutoro switch uye epamberi tekinoroji dhizaini yekunze. Iyi mutoro yekumhanyisa switch inoumbwa neakagurunura, yekuvhara chipinga uye yekushandisa mashandiro uye zvimwe zvikamu. Nekushandisa musimboti wevhavha yekuvhiringidza, ine simba rakasimba arcing, kuita kwakavimbika, hupenyu hurefu hwebasa, diki vhoriyamu, hapana kuputika dange ...
FZRN21-40.5 Indoor Yakakwira Voltage Mhepo Mutoro Break Break
Mamiriro ekunze 1. Kukwidza: 1000m; 2. Ambient tembiricha: -40 ~ + 40 ℃; 3. Hunyoro hwehukama: zuva nezuva avhareji 95%, pamwedzi wepakati 90%; 4. Kudengenyeka kwenyika kwakasimba: 8 degree; 5. Kusvibisa giredhi: II dhigirii. Technical parameter NO. Zvinhu Unit Kukosha 1 Rated voltage kV 40.5 2 Yakatemerwa frequency Hz 50 3 Yakakwira yakatemerwa zvazvino fuseji A 63 4 1min simba frequency inomira voltage kV 95/110 5 Mheni yekumanikidza inomira voltage kV 185/215 6 Rated yepamusoro inomira yazvino kA 50 7 .. .
FZN25-12 Nhepfenyuro Yemukati Yakakwira Voltage Vhaidhi Mutoro Kuputsa Chinja
FZN25-12 yemukati HV yekutsvaira mutoro yekumhanyisa switch switch ye3-chikamu AC 50Hz 12kV indoor switch michina .. ♦ Rudzi rwekushandisa: kurudyi operati pane d kuruboshwe kushanda; Direction Mashandiro enzira: kuruboshwe kushanda, kushanda kurudyi; ♦ Kushanda: indoor 12kv switchgear. Zvakatipoteredza Mamiriro ezvinhu, Ambient tembiricha: -25 ° C 〜 + 40 ° C; Kukwirira: <1000m (pamusoro pegungwa); Hum Hukama hune hukama: zuva nezuva avhareji <95%, pamwedzi av ...
FN12-12 Series Indoor Yakakwira Voltage Mhepo Mutoro Break Break
FN12-12 yemukati HV mweya mutoro yekuzorora switch ndeye 3-chikamu AC 50Hz 12kV indoor switch michina. Way Yekuisa nzira: kumberi-kukwira, kudivi rakamisikidzwa, kurongedza kwakamiswa; ♦ mashandiro anoita ♦ Yekushandisa mhando: kurudyi mashandiro uye kuruboshwe mashandiro; ♦ Kushanda: indoor 12kv switchgear. Zvakatipoteredza Mamiriro ezvinhu, Ambient tembiricha: -25 ° C 〜 + 40 ° C; Kukwirira: <1000m (pamusoro pegungwa); Hum Hukama hune hukama: zuva nezuva avhareji <95%, monthl ...
FN7-12 Series Indoor Yakakwira Voltage Mhepo Mutoro Break Break
FN7-12 mhando nyowani yemhepo yemukati yepamusoro-voltage mutoro yekuzorora switch. Iyo inokodzera AC 50Hz, yakatarwa voltage 12kV matatu-chikamu AC simba system, sekutyora mutoro izvozvi uye kuvhara pfupi-redunhu razvino. Type Tsananguro Kushanda Mamiriro ● Ambient tembiricha: -25 ° C ~ 40 ° C; ● Kukwidza: <1000m; ● Hunyoro hwehukama: avhareji yezuva nezuva <95%; Mwero wemwedzi <90%; ● Panenge pasisina chinhu chinopisa, chinopisa uye chinoputika gasi kana mhute panzvimbo iyi. ● Kusava nekudengenyeka kwechisimba. Technica ...
FN5-12 Series Indoor Yakakwira Voltage Mhepo Mutoro Break Break
FN5-12 mhando indoor AC yakakwira voltage mutoro brek switch (Inotevera inozonzi mutoro break switch) maapuro kune AC 50Hz 12kV network, yekutyora mutoro izvozvi uye kuvhara pfupi dunhu razvino. Mutoro zororo chinja pamwe fiyuzi anogona akagura pfupi redunhu razvino kuti chinja kudzivirira. Iyo yekuremerwa yekumhanyisa switch inogona kushandiswa ne CS6-1 mhando chinyorwa chemanyorero mashandiro, uye ichi chigadzirwa chakakosha chinoshandisa CS bhuku rekushandisa mashandiro. Kunyorera FN5-12 mhando indoor AC yakakwira voltage mutoro kuputsa switch (Kubva pano ...